sheet aluminium muraayad - Shiinaha Hongbao Aluminum Industry
Mirror sheet aluminium safeeyey Daawaha: 1050,1060,1070,1085,1100,3003,3005,5005,5083,8011
camal: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26
1. Standard xirxirida dhoofinta seaworthy, ugalay alwaax ama xaaladaha alwaax warqad Kraft,
2. xirmo kale la sameeyo igama ku salaysan shuruudaha macaamiisha.
3. Xidhmada aad u xoog badan.
Si faahfaahsan Delivery: 30 maalmood gudahood
muraayad aluminium safeeyey sheet Codsiga
1) dheeraad ah samaynta maacuun. 2) Solar film milicsato
3) Muuqashada dhismaha
4) qurxinta Arrimaha Gudaha: saqafka, darbiyada, iwm.
5) golaha wasiirada Furniture
6) wiishka decoraction
7) aayaadkanaga, nameplate, bacaha samaynta.
8) qurxiyey gudaha iyo dibadda ee gaariga
qalabka 9) Qoyska: qaboojiyeyaasha, foornooyinkaaga microwave, qalabka audio, iwm.
10) The macaamiisha qalabka korontada, telefoonada gacanta, kamaradaha digital, MP3, U disk, iwm.
11) LED Light, nal daaha leh, diffuser ama laambad dhaadheer
muraayad sheet aluminium safeeyey waa muuqaalka dabiiciga ah ee aluminium sida ka timaado dhagax rogid. Muraayad waxyaabaha sheet aluminium safeeyey Hongbao ee waxaa loogu talagalay inay balaariso sifooyinka badan oo u gaar ah biraha ee, ay ka mid yihiin cufnaanta hoose iyo miisaanka iftiin, reflectivity sare, conductivity wanaagsan, UV iyo iska caabin iftiinka qoraxda, iska caabin ah cimilada, barti sare iyo xoog gaar ah.
(1) 1070 muraayad sheet aluminium safeeyey
camal: H24, H18
oogada: dhameysatay Bright
Total milicsiga 86% milicsiga waajihi ≤12%
xiisad xoog 125N / mm
dhalidda xoog 105N / mm2
(2) 1085 muraayad sheet aluminium safeeyey
Aluminum - Data Technical
Product nooca Total Reflectance Specular
Reflectance Waajihi Reflectance
Miisaanka 1-4 Daawaha
(engegnaantiinna) Min Xoog siligga
MPA Min Vield Xoog
MPA Ugu Yar
5036-3 dheer 60 ° 60 ° trans
caadiga ah 86 86 80 77 15 1 Al 99,85 H18 125 105 2
Mirror sheet aluminium safeeyey waxaa si balaadhan looga isticmaalaa Laydhka, Qurxinta, Architecture, Consumer Electronics.Hongbao Aluminum mar walba diiradda saarayaa keeno aluminium anodized isticmaalo duurka technology iftiiminta. Sanadihii la soo dhaafay, waxaana la aruursaday badan oo waayo-aragnimo ee nalalka.
(1) Laydhka Mirror qoray sheet aluminium
Maalmahan aluminium waa bir ah oo aad u moodada, loo duurka kasta. Sababo la Faa'iidooyinka iska caabin ah daxalka, xoog farsamo iyo plasticity fiican ay, aluminium ku habboon yahay in loo isticmaalo in processing farsamo kala duwan. Intaa waxaa dheer, guryaha laga fekerayo iftiin fiican iyo technology processing dusha ka dhigi aluminium ku habboon dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka iftiiminta.
The scopes codsiga ugu weyn ee wax soo saarka loo isticmaalaa in nalalka ka mid ah:
• laambadihii dibada
nalalka • daaqaddii
• laambadihii LED iyo siraaddo
• nalalka Tri-caddayn
• nalalka Tunnel
Previous: sheet aluminium rogid kulul
Next: sheet aluminium qotontay
7050 Sheet Aluminum
Sheet Aluminum gariiradda
Sheets Aluminum Waayo Sale